Hillaac caalami ah ama dhimbiil, waa dhacdo naadir ah | Saadaasha Shabakadda
Sawir - Weekend-perfil.com
Sidii ay u ahayd bilowgii sheeko naxdin leh, dhowr jeer ayay suurtagal noqotay in cirka laga arko waxa loo yaqaan shucaaca adduunka ama dhimbiil. Kubad dhalaalaysa oo dhalaalaysa oo ka tagaysa qof kasta oo arkaa iyada oo laga baqayo inay la xiriirto onkodka.
Muddo dheer waxaa loo tixgeliyey quraafaad, dhalanteed ama wax soo saar ka mid ah male-awaalka dadka qaar. Laakiin hadda waa la ogyahay taas waa dhacdo runtii jirta, inkasta oo aan wax badan laga aqoon isaga weli.
In kasta oo aysan weli caddayn sida loo aasaasay, haddana khubaradu sidaas way aaminsan yihiin tamarta dhalaalaysa dhalaalka waxaa soo saaray isku darka kiimikada oo si tartiib tartiib ah loo sii daayay. Si ay isugu dayaan inay wax badan ogaadaan, waxay isku dayeen inay ku abuuraan shaybaarrada, laakiin iyagoon helin natiijooyin lagu qanci karo.
Waxa la ogyahay xilligan waa in inta lagu jiro duufaan koronto, ay dhici karto inay dhacdo inay sameysmo. Hadday sidaas tahay Waxay qaadan kartaa qaabab kala duwan: oodo, goobaab, ilmo ama ul u eg. Cabirku sidoo kale wuu kala duwanaan karaa wax badan: inta udhaxeysa 10 iyo 40cm, marka waa dhacdo muuqata oo aan la mid ahayn in laga arko hawada furan marka loo eego dokumentarigaaga fadhiga.
In kasta oo ay qaadato dhowr ilbiriqsi, haddana waqtigaas waxay awood u leedahay inay waxyeello geysato. Bishii Oktoobar 21, 1638, dhacdo la yiraahdo "Duufaantii Weynayd" mid ka mid ah burburiyey saqafka kaniisadda San Pancracio, ee degmada Devon (England). Taariikhdeena ugu dambaysay, mid ayaa lagu arkay Febraayo 25, 2012, magaalada Rosario (Argentina). Halkaas, markhaati ayaa qaraxu haleelay midkood intuu ku sugnaa jikada gurigiisa.
Tani waa dhacdo qarniyo badan soo jiitay dareen badan kuwa nasiib u yeeshay inay arkaan. Haddii mid ka mid ah uu ka dhaco meel u dhow guriga, xorriyad u qaado inaad sawir ka qaadatid: waxaa jira indha indheyn yar oo dokumenti ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hillaac caalami ah ama dhimbiil, waa dhacdo aad u yar oo la arkay
Qiyaamaha maalinta aakhiro ma daadadku (mana sii jiri doonto intaan noolahay)